Royal Big Cat: သတင်းပါးခြင်း
Showing posts with label သတင်းပါးခြင်း. Show all posts
From : ..http://www.mmdailystar.com/2013/04/blog-post_2893.html
ယုတ်မာပက်စက်မှုများကြောင့်- အစ္စလာမ်မစ် မွတ်ဆလင် များကို နိုင်ငံ အသီးသီးမှ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးက
သို့ဖြစ် ပါ၍- အစ္စလာမ်သည် အခြားသော ဘာသာများကို လေးစားတန်ဖိုးထားကြောင်း၊
ဘာသာရေး တန်း တူ ညီ မျှ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံသော အစ္စလာမ်အယူဝါဒဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြ သည့် အနေဖြင့်-
အစ္စလာမ်ဌာနချုပ်- ပင်မအခြေစိုက်စခန်း ဆော်ဒီတွင်- ဘာသာခြား
ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တစ်ထောင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးပေါင်း တစ်ထောင်၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် ဆောက် လုပ် ခွင့်ပြုပြီး- ဘာသာအားလုံး လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာ - သာသနာပြုခွင့်ကို- အစ္စလာမ်ဌာနချုပ်-
ပင်မ အခြေစိုက် စခန်း ဆော် ဒီ တွင် အမြန်ဆုံးခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်-
အစ္စလာမ်သည် အခြားသော ဘာသာများကို လေးစားတန်ဖိုးထားကြောင်း၊
ဘာသာရေးတန်းတူညီမျှလွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံသော အစ္စလာမ်အယူဝါဒဖြစ်သည်ကို- လက်တွေ့လုပ်ရပ်ဖြင့်
သက်သေပြပေးပါရန်- လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ သာတူညီမျှ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်
နှင့် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးကို ရှေးရှူပြီး အမြန်ဆုံးခွင့်ပြုပေးပါရန်- တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာသာသနာပြုခွင့်တို့ကို အထူးလေးစားမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မော်လ၀ီ ( ကြာကူရီ )များ အဖွဲ့ချုပ်
လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြား- မြန်မာနိုင်ငံသား
" ဆိုပြီး- ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေမှာ - မွတ်ဆလင်တွေ အင်အားကောင်းမလာသေးခင် အချိုသတ်တဲ့
Taqiyya ကို သုံးနေမည့်အစား-
ဒီလိုလေး Statement လေးထုတ်ပြီး.....
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မော်လ၀ီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့- ကမ္ဘာ့
ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုရှေးရှူပြီး - မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီက ဆရာသခင်ဝါဟာဘီတွေကို ဒီလိုလေး
ငါတို့- မူဆလင်တွေကပဲ - မင်းတို့ဘာသာခြားနိုင်ငံမှာ ဗလီတွေထောင်နဲ့ချီဆောက်မယ်။
( ဒါကိုမင်းတို့ ခွင့်ပြုရမယ် )
ငါတို့ မူဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီမှာတော့ - ဘာသာခြား စေတီပုထိုး-
တစ်ခု ( တစ်ခု ) တောင်ပေးမဆောက်နိုင်ဘူး။ အသက်သာအသေခံသွားမယ်။
မူဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီမှာ- ဘာသာခြားစေတီပုထိုး- တစ်ဆူမှ
ဒီလိုစိတ်ထား ရှိကြတဲ့ - မူဆလင်အများစုဟာ- အလယ်အလတ်မူဆလင်တွေလား။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်ကို က အစွန်းရောက်စာအုပ်ဖြစ်ပြီး- မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင်က
မူဆလင်တွေရဲ့ တစ်လမ်းသွား - အရ
**** အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ- မူဆလင်များ အသတ်ခံရရင်သာလျှင်- တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိမူဆလင်များအားလုံးက
ဘာသာခြားများကို ဂျီဟတ် ဆင်နွဲ( ၀ိုင်းရိုက်) ကြရမှာဖြစ်ပြီး။
မူဆလင်များက ဘာသာခြားများကို အောင်မြင်စွာသတ်ဖြတ်နိုင်ရင်တော့
နောက်ပြောင်ကျီစယ်ခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်- ဘာသာခြားများက သည်းခံကြရမည်ဖြစ်သည်။ ( အလ္လာဟ်ဘုံမှာတောင်
အပျိုစင်၇၂ယောက် ဆုချီးမြှင့်ခံရအုန်းမယ် )
>**** ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသည်မှာ- မူဆလင်များက ဘာသာခြားနိုင်ငံများတွင်
- မူဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီနှင့် ရှရီးယားအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများတွင်-
ဘာသာခြားအဆောက်အအုံများ ( ခရစ် ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုး၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း
) ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ပြောခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါ။
**** လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ - မူဆလင်ယောကျာ်းများက -
ဒေသခံဘာသာခြား မိန်းကလေးများကို အစ္စလာမ်အတွင်းသို့သွတ်သွင်းခြင်းကို သာဆိုလိုပြီး-
ကြံစည်လျှင်တော့ ဓားနဲ့လိုက်ခုတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား
၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးရွားအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ
ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည် ။
မတင်ဖို့တားလေ ပိုတင်ချင်လေပါ... အားလုံးတွေးတောနိုင်ဖို့လေးတွေပါ
သတိပေးချတ်: ဒီဆိုဒ် မှာနိုင်ငံရေးတွေ ဆက်ပါနေပါက ပျတ်ဆီးအောင် ဆိုဒ်ပျတ်ဆီးအောင်တိုက်ခိုက်မည်ဟု အသိပေးပါသည်
ကျနော် ကြောင်ကြီး တော်တော် ကြောက်သွား မိပါတယ်... အဟတ်.....
ဒီ ဆိုဒ်ထဲမှာ စောက် ကုလားမကောင်းကြောင်းပဲ ပါတာပါဗျာ..... သွေးထိုးပေးတာ ဘယ်နခုပါလဲ ဆိုတာ ကြောင်ကြီး ပရိတ်သတ်တွေ သိပါတယ်... ဆိုဒ် ပျက်သွားတော့ရော ကျနော် ကြောင်ကြီး ကြောက်စရာလားဗျာ...... ကိုယ့်စီးပွားရေး တစ်ခုမှ မပါပါ.... ကိုယ်လို သူလို စုစောင်းထားသမျှလေးတွေ ကို ၀င်ကြည့်ချင် ကြည့်လို့ရအောင် စုစည်းတင်ပြထားတာ မျိုးလောက်ပါပဲ...... လိုချင်ရင်လဲ လာခဲ့ ကုလားတွေကို အပိုင်ပေးလိုက်မယ်... လျှို့ဝှတ်ထားတာ တစ်ခုမှ မပါ..ပါဘူး.... ကျနော့ ဘလော့ကို မကြာခဏ ဟတ်ကြပါတယ်... အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြီးတော့ ငွေတောင်းတယ်... ပို့ပေးရင် ပို့ပေး မပို့ပေးရင် ဖျတ်ပစ်မယ်ပေါ့... ကြောင်ကြီး ကမကြောက်ရိုး အမှန်ပါ.... ဟတ်လို့ ပြန်ယူလဲ.... ၃နာရီ လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရင် ပြန်ရပါတယ်... ကြောင်ကြီး အတွက်က လွယ်ပါတယ် ဗျာ.....
ကြောင်ကြီးဘလော့မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကို လူမြိုမခံချင်လို့ သတိပေးတာလောက်ပဲရှိပါတယ်.ဒါ့ကြောင့် အစောကြီး ကတည်းက ကြောင်ကြီးဘလော့မှာ 786 တွေလက်မခံပါလို့ သတိပေးစကားပြောခဲ့ပြီးသားပဲ ကြောင်ကြီး လွန်မယ် မထင်ဘူးလေ..... ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်တယ် ထင်လှရင် ကြောင်ကြီး ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာ အရင် ဖော်ထုတ်လိုက် သူငယ်ချင်း.....
. Blogger ကြောင်ကြီး (သို့) တော်ဝင်ကြောင်ကြီး
အိအ်ိဖြိုးနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ကြောင်ကြီးမှာ လဲနာမည်ကြီးနေရပါလား..... ကြောင်ကြီး ကိုလာဖျတ်ခိုင်းလို့ကတော့ အချိန်မရွှေး ဖျတ်ပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ.... ကြောင်ကြီးကြောင့် တစ်ပါးသူနှစ်နာတာမျိုး ကြောင်ကြီး မလိုလားတာ အမှန်ပါ.... comment တွေ ချက်ချင်း မတင်ပေးရတာကလဲ ကြောင်ကြီးကို ကြိုက်သလိုဆဲကြ ကြောင်ကြီး ခံနိုင်ပါတယ်.... ကြောင်ကြီး ပရိတ်သတ်တွေ အချင်းချင်း စကားများကြတာ မလိုလားလို့ပါ.... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ါသနာတူတွေမို့ စိတ်ဖြေဖျောတ်စရာ နေရာလေးဖြစ်တဲ့ ကြောင်ကြီး နေရာကို လာလည်ကြတယ်... လာလည်ရင်း စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ပြန်သွားတာကိုပဲ ကြောင်ကြီး လိုချင်ပါတယ်... ကြောင်ကြီးဘလော့မှာ ရောက်လာပြီး ရန်ဖြစ်လို့ စိတ်အနှောက်အယှတ် ဖြစ်ပြီး ပြန်သွားတာမျိုး မလိုချင်လို့ပါ........ (ကြောင်ကြီး ကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦး ထိခိုက်နစ်နာရမယ်ဆိုရင် အချိန်မရွှေး တောင်းပန်ဖို့ အသင့်ပါပဲ)
ကြောင်ကြီး အကောင့် Recovery ပြန်လုပ်နေပါ သဖြင့် ကြောင်ကြီးလောလောဆယ် ပို့များ တင်နိုင်ဦးမည်မဟုတ်ပါ ကြောင်ကြီး ကိုယ်စား ကျားကြီးမှ ပို့များ တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လောလောဆယ် comment များ ဖော်ပြပေးသွားနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလဲ အသိပေးအပ်ပါသည်.... နောက် ၃ရက်နေလျင် ကြောင်ကြီး ပြန်လာမည် ဖြစ်ပါသည်....
ကြောင်ကြီး (ကိုယ်စား ) ကျားကြီး
ညှို့မဂ္ဂဇင်းပြီးနောက် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် အသွင်တူ ထွက်လာခဲ့သော မာယာမဂ္ဂဇင်း
facebook တွင်ဇတ်လမ်းရှာချင်သူများ အတွက် သတင်းကောင်း
ကိုယ်တွေ့ ကြု့ဖူးသူ တစ်ယောက်က ဖောက်သည်ချလို့ ပြန်ချပေးလိုက်ရတာပါ.... ကိုယ်တိုင်သာ... မန်ဘာ သွားဝင်ထားကြပေတော့.... သူ့လင့်က https://www.facebook.com/SleepWithMeBaby မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
lion city မာ ကိုသျင်နေမင်း ဦးစီးတဲ. model show မာ litana bra ကြော်ငြာ အတွက် show မလျောက်ခင် စင်နောက်မာ phone နဲ. အမှတ်တ၇ ၇ိုက်ထားတာပါ .bra show မာ sexy model နွယ်နွယ်ထွန်း။ နန်းသီ၇ီမောင်။သဇင်သင်း။ နဲ. အခြား model များ စွာ ပါဝင်ပါတယ်
ခင်နီလာ ဖုန်းကိုင် ၀၉၄၂၁၀၀၃၄၈၆ တစ်ညသုံးသောင်း။လျော့ ပေးမယ်။
ဆိုပြီး မေလ်းထဲကို ရောက်လာပါတယ်.... ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကြောင်ကြီးလဲ မသိပါ.... တမင်နံမည် ဖျတ်ချင်တဲ့ သူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖျတ်ပေးသွားပါမယ်...
တိုင်းရင်းဆေး အမြို့မြို့ဆိုင် တိုင်းမှာ ရနိုင်ပါပြီ
ကြောင်ကြီးတော့ နောက်မှ ဒေါင်းပြီး တင်ပေးတော့မယ်...
မိန်းကလေးများ ကိုယ့်ချစ်သူနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် လျှိုဝှက်ကင်မရာဖြင့် အရိုက်မခံရရန် ကူညီမည့် Phone Application လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ September တုန်းကပေါ့ ချစ်သူလေးနဲ့ အတူတူ လည်ရင်း Youtube Video တစ်ခု ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ Love Scence လေးပေါ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး နမ်းနေကြတယ် နမ်းရင်း နမ်းရင်း ..............(ဆက်သာဖြည့်တွေး လိုက်ကြပါတော့) မကြာပါဘူး ဖျနးဖျန်းဖျန်းဆိုပြီး ပါးကြီး ၃ချက်ဆင့် ပိတ်ရိုက်တယ် ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ဘာကြောင့်ပါ လိမ့်ပေါ့..ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကောင်မလေးဖုန်းက
အသံတွေထမြည်တာ ဘာလို့ မြည်တာတုန်း?? မြည်မှာပေါ့ ကောင်လေးက အခန်းထဲမှာ ကင်မရာခိုးတပ်ပြီးသူတို့Love Scence လေးကို လျို့ဝှက်ရိုက်ကူးရေး လုပ်နေတာ အဲဒါကို ကောင်မလေး ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Software လေးက ထောက်လှမ်းမိပြီး အချက်ပြ လိုက်တာပေါ့ဗျာ... ကဲ - ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲချင်သူများ... မိသားစုနဲ့ အတူတူ ခရီးထွက်လည်ရင်း ဟော်တယ်မှာ တည်းတဲ့အခါ ကင်မရာရန် ကြောက်သူများ.. Shopping Center တွေမှာ Fitting Room မှာ ၀တ်အစား လဲတဲ့အခါ ကင်မရာရန် ကြောက်သူများ.. ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ကူညီပါရစေ..ခင်ဗျား ဒေါင်းသွားချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးကို နှိပ်ပါ Myanmar IT Group
အမျိုးသားများအမှားလုပ်မိသောအချက် (၂၅) ချက် တဲ့ အမျိုးသားများအမှားလုပ်မိသောအချက် (၂၅) ချက် တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ဖတ်ပါ။ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဆက်လက်ဖက်ရှု့ပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှင်များနဲ့ ဗဟုသုတရှာမှီးသူများအတွက်
ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ရေးထားတဲ့ စာတွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွက် ကျွန်ုပ်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဝေဖန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ စေတနာဖြင့် ဖွင့်ဟသော သင့်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို ရင်မှာဆီးလို့ ကျွန်ုပ်သိပ်ဆည်းထားပါ့မယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကိုတောင်မှ အရင်စမနမ်း ဘဲ အဓိကနေရာကိုပဲ တိုက်ရိုက် အရောက်သွားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေ၊ အကုန်ခံခဲ့ရတဲ့ ငွေတွေ ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာ အတွက် တန်ရာတန်ကြေးရဖို့ လုံးပန်းနေတာနဲ့ တူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် အစပျိုးတဲ့ အနေနဲ့ ပြင်ပ အစိတ်အပိုင်းတွေမှ တဆင့် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အမျိုးသားအများစု အမှတ်မှားကြသည်မှာ မိန်းကလေးတွေဟာမုတ်ဆိတ်မွှေး နှုတ်ခမ်းမွေးတွေကိုသဘောကျတယ်လို့ ယုံမှားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူး တစ်ကောင်ရဲ့ စူးတွေလို ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ သင့်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာတွေ ပေါင်ခြံတွေကိုထိတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးတွေခဗျာ ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းနေပါစေ သာယာနေကြတာလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ယားသလိုလို အခံရခက်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးက မိန်းကလေးတို့ ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကို အနှောက်ယှက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
(ချိုင်းမွှေးမဲမဲလေးတွေကိုတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက် မိန်းကလေးအများစု နှစ်သက်ကောင်း နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်။)
အမျိုးသားအများစု ဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားကို အိမ်ရှင်မတစ်ယောက် ဖရဲသီးဝယ်ဖို့ မှဲ့ သလား မမှဲ့ ဘူးလားစမ်းသပ်သလို အကြမ်း ပတမ်းကိုင်တွယ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ ရင်သားဟာ နူးနူးညံ့ညံ့ လေးတွေပဲ ခံစားချင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လျှင်မြန်လှတဲ့ လက်တွေက သူမတို့ရဲ့ ရင်သားတစ်စုံပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင် ညင်ညင်သာသာ၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ သာယာဖွယ်ကောင်းအောင် နှိုးစွ ကြည့်ကြပါ။
အမျိုးသားအများစု ဟာ အမျိုးသမီးတို့ ရဲ့ သားမြတ်ခေါင်းကို ဘာကြောင့် အကိုင်အတွယ်ကြမ်းကြမှန်းမသိပါဘူး။လေမရှိတော့တဲ့ ဘောလုံးလေးလိုလည်း ပြားသွားအောင် ဆွဲချတတ်ကြပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ တောတောင်ထူထပ်တဲ့ နေရာမှာ ရေဒီယိုလှိုင်းရှာသလို လက်ညှိုး နဲ့ လက်မနဲ့ ညှပ်ကိုင်ပြီး စက်ဝိုင်းလိုလှည့်တတ်ကြပါသေးတယ်။ သားမြတ် ခေါင်းလေးဟာ အရမ်းခံစားလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ အကိုက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ထိလဲ မမာကျောပါဘူး။ ဒါကြောင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်လို့ ညင်ညင်သာသာ စို့ပါ။ သစ်ရွက်ပေါ်တင်နေတဲ့ ပျားရည်စက်လေးလို ဖြေးဖြေးချင်းလျှက်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာတစ်ခုလုံးမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလို့ ပါဝါပိတ်ထားလို့ရတဲ့ နေရာ မရှိပါဘူး။ နေရာပေါင်းစုံမှ ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ မြို့တော်ဆီကိုပဲ တိုက်ရိုက်မသွားဘဲ လမ်းခုလပ်က
ကျေးရွာလေးတွေကိုလည်း ဝင်လည်သွားမှ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ဒုံးဆိုတာ သင်အသုံးပြုတာပါ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်လို ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းကို ကိုင်တိုင်ပဲ စွပ်ပါ ပြီးရင် စွန့်ပစ်ပါ။ အမျိုးသမီးတို့ က လုပ်ပေးတယ်ဆိုလျှင်တောင် ဆန္ဒမပါတတ်ကြပါဘူး။
အမျိုးသမီးတို့ ရဲ့ ခံစားမှုအပေးဆုံး အင်္ဂါ ရဲ့ အစေ့ ဟာ တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ရင် ခံစားမှု ကောင်းကောင်း မပေးတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစေ့ ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို စက်ဝက်ပုံစံ ထိတွေ့ ဆောင်ရွက်ပေးကြည့်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ မတူတတ်ကြပါဘူး။ ခရီးသွားနေရင်းမှ သင့်ဘက်က
ခဏနားလိုက်ပါက သူ့တို့ ရဲ့ လတ်တလောခံစားမှုတွေ ပျောက်သွားတတ်ပြီး ဟိုး .. အစကိုပြန်ရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောပေမယ့်လည်းကြာကြာမနားပါနဲ့။ ပုံစံတွေကိုလည်း ခဏခဏ မပြောင်းပါနဲ့ ။ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အားထုတ်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ရှက်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဖော်ရှေ့မှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ ရပ်မနေချင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူမတို့ ရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ကလေးကစားစရာအရုပ်လေးတစ်ခုလို အလောတကြီးမချွတ်ဘဲ၊ တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တစ်ခု ဖွင့်ဖောက်သလို တစ်လွှာချင်း ကြွေကျပါစေ။
အမျိုးသားအများစုဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အင်္ဂါ အစေ့ကို မြေပုံကြည့်စရာမလိုအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာတွေ့ကြသော်လည်း မိန်းမတွေဟာ အင်္ဂါဇတ် ကြီးအထဲထဲ မှာပဲ လိင်ကိစ္စကို အပြည့်အဝ ခံစားကြတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ အစေ့ကိုတော့လျစ်လျှူရှု့တတ်ကြပါတယ်။ သင်တို့ ရဲ့ လက်တွေ အောက်ကို တဖြည်းဖြည်းလျှောဆင်းပြီဆိုတာနဲ့ ဘဏ်ထဲရောက်နေသလိုပဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ အပေါက်ထဲ တန်းနှိုက်တော့တာပါပဲ။ မူလအားဖြင့်တော့ အဲ့လိုလုပ်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘက်က ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ လုပ်မိရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမတို့ ရဲ့ အင်္ဂါအစေ့ကို ပဲ အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး အင်္ဂါဇတ်ရဲ့ အပြင်ပိုင်းတွေကို အရင် ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ပါ။ ပြီးမှ အတွင်းကို နှိုက်ကြည့်ပါ။ သူမ ကြိုက်ရဲ့လားကြည့် မကြိုက်ရင် ရပ်လိုက်ပါ။
အိမ်ထောင်ရှင် ပဲ ဖြစ်ပါစေ။ အတူတူနေလာတာပဲ ကြာပါစေ။ အမျိုးသမီးတွေက သင့်ရဲ့
အဝတ်အစားကို ချွတ်မယ့် ဟန်မရှိသေးရင် အတွေ့အကြုံရင့်တစ်ယောက်လို အဝတ်ဗလာနဲ့ မနေကြပါနဲ့။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပုံဆိုးဆိုးနဲ့ မနေချင်ကြသလို သင့်ရဲ့ ပုံဆိုးဆိုးကြီးကိုလည်း ကြည့်ဖို့ ဝန်လေးနေတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ရွှေပန်းကို အင်္ဂါဇတ်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကုန်ထုတ်စက်ရုံက အင်ဂျင်ကြီးတစ်လုံးလို စွမ်းအားပြည့် မောင်းနှင်တတ်ကြပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှပဲ လောင်စာကုန်သွားတဲ့အတွက် ထိုအမျိုးသမီးဘဝဟာ ဆက်လက် မလည်ပတ်နိုင်တော့တဲ့ အင်ဂျင်ဟောင်းတွေ ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်သမ တစ်ဦးလိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးမှ စပါ။ သန့်သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့ သက်လုံမှန်ပါစေ။
(သင့်ရဲ့ မာကြောတဲ့ တင်ပါးရိုးတွေ ဟာ သူမရဲ့ ပေါင်တွေ ဗိုက်တွေကို ထိတဲ့ အခါမှာနာကျင်တတ်တာကိုလည်း သတိရှိပါ)
အမျိုးသားအများစုဟာ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ မျက်လုံး အဖြူရောင်သန်းမလာခင် သူတို့ဘက်ကအရင် ပြီးသွားမှာ ကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမြန်တယ်ဆိုရင် သင့်ဘက်မှ ဖြည့်စွက် အစီအစဉ်တွေဆွဲထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်မှာ
ရွှေပန်းတစ်ခုထဲ ပိုင်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားပေးထားတဲ့ အင်္ဂါအစုံရှိပါတယ်။ ကိုယ်အရင် ပြီးတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားနေစဉ် စပ်ကြားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်အဖော်တွက် တတ်နိုင်သမျှ ပေးဆပ်နိုင်ပါစေ။
အမျိုးသားများ ရဲ့ မပြီးနိုင် မစီး နိုင် ကြာညောင်းမှုဟာလည်း လိင်ကိစ္စအတွက် ကောင်းသော ဆုလဘ်ပါ။ သတိထားရမှာက ပွတ်တိုက်ပါများလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ ရဲ့ အင်္ဂါဇတ် အတွင်းပိုင်း နံရံတွေ ဟာ ထုံလာတတ်ပြီး ခံစားမှု ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ပထမဆုံးပန်းဝင်အောင် ပြေးနေတဲ့ မာရသွန် သမားလို မနားတမ်းပြေးနေရပါမယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ သင့်အဖော်အမျိုးသမီးကို စိတ်ဝင်စားစရာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု သူမလက်ထဲ မှာ ထားပေးပြီး အာရုံလွှဲနေပါစေ။
အမျိုးသမီးတွေ ကို ပြီး ပြီလား၊ ကောင်းလားဆိုတာကတော့ အမျိုးသားတိုင်းမေးချင်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေ
ကို ကောင်းအောင်၊ သာယာအောင်၊ အပြည့်အဝ ခံစားမှု ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားချင်လို့ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေ ဘက်ကတော့ အဲ့သည်လို မေးခွန်းတွေကိုမုန်းပါတယ်။ အဲ့သည်လိုက်မေးလိုက်တာနဲ့ လက်တစ်လော သူတို့ ခံစားနေရတဲ့ ဖီလင်လေးတောင် ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင် သိဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေ က အသံကျယ်ကျယ်ပြုတဲ့အတွက် သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အသံမထွက်သော်လည်း အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ဟန်ပန်မှုအရာတွေ ပြတတ်ကြပါတယ်။ (ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ပြီးပြီလား လို့ အမေးမခံချင်ရင် အရှက်တရားတွေ ဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အဖေါ်သိအောင် ပုံမှန်ထက် ထူးခြာတဲ့ အရိပ်အရောင် ပြရပါမယ်။)
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အင်္ဂါ အစေ့ကို လျှာဖြင့် သာယာမှု ပေးတဲ့ နေရာမှာ ဧရာမကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ကခွက်ထဲက နွားနို့ကို လျှာဖျားလေနဲ့ လျှက်သလိုလုပ်မနေသင့်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးကို လုံးလုံးလျားလျားဆင်းသွားပြီး သင့်ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ့်ရဲ့ အမာကြောဆုံးကြွက်သား(လျှာ) နဲ့ အင်္ဂါ အစေ့ နဲ့ အင်္ဂါ အစေ့ ပတ်ပတ်လည်ကို ညင်ညင်သာသာ ထိတွေ့သာယာမှုပေးလိုက်ပါ။
အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ရွှေပန်းကို မြင်အောင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခေါင်းကို အောက်သို့ အားသုံးငုံခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ မျက်လုံးကရွှေပန်းကိုတွေ့ပြီဆိုရင် ပါးစပ်လည်း ရွှေပန်းဆီရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြပုံရပါတယ်။ အမျိုးသမီး အများစုက မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အဖော်ကို ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် သင်က အရင်လုပ်ပြပါ။ ပြီး မှ သူ့မကိုစည်းရုံးကြည့်ပါ။
သုတ်ရဲ့ အရသာဟာ ပင်လင်ရေထဲ ကြက်ဥအကာရောနေသလိုပါပဲ။ ညှီစို့စို့နဲ့ပါ။ မိန်းမအများစုကတေ့ာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူမက ပါးစပ်နဲ့ သာယာအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ သင်ဘက်ကပြီးတော့မယ်ဆိုရင် သူမ ကို အသိပေးပါ သို့မှာသာ သူမနှစ်သက်သလို စီစဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အပြာဇတ်ကားတွေမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူ့တို့ ရဲ့ ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ်ပေါ် သုတ်တွေလွှတ်ထုတ်ခံရတာကို နှစ်သက်ကြပုံရပါတယ်။
တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ပေကျံသွားတဲ့ အဝတ်ကိုလျှော်ရရင် ရေဖိုး၊ မီးဖိုး၊ ဆပ်ပြာဖိုးကုန်တာပဲအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသားတွေဟာ သူ့တို့ ရဲ့ အဖော်ကို ရိုမေးနီးယား အားကစားမယ်လို့ ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာ ကိုယ်ပျော့ပြောင်းနေစေချင်ကြတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ရိုးဂ တစ်ယောက်လို ပံစုံအမျိုးမျိုးနဲ့ ခရီးသွားချင်ကြတာကိုး။ သိပ်ပြီးတော့ ရည်ရွယ်ချက်မကြီးကြပါနဲ့။ ကိုယ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ အရင်စဉ်းစားကြပါဦး။ အားကစားမယ်လား၊ ဘဝအဖော်လားဆိုတာ။
စအို နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ စအိုကြွက်သားတွေရဲ့ စုပ်ငင်အားကြောင့် အမျိုးသားတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ပြီးစီးခါနီးမှာ အမျိုးသားများရဲ့ ရွှေပန်းကို ဆွဲညှပ်ထားတဲ့ အခါမှာ ခံစားရတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက်တော့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ အဖော်ကို အရင် မေးပါ ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားကြည့်ပါ။ အမူးပြေသွားတဲ့ အခါကျမှ ညက မူးလို့ ဖြစ်သွားတာဆိုပြီး သိက္ခာမဆယ်မိဖို့ သတိရပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လည်ပင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်ကို သာသာယာယာလေး နမ်းစုပ်ပေးခြင်းဟာ ကာမစိတ်ကိုကောင်းကောင်းနှိုးစွပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သာဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပါက ဘယ်မိန်းကလေးမှ လည်စွပ်ပါတဲ့ အင်္ကျီဝတ်တော့မှာ မဟုတ်သလို လည်စီးပဝါလည်း အသုံးပြုကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
သင်ဘက်ကပြီးချင်နေတဲ့အတွက် အရင်ပြီးစီးအောင် လုပ်ချင်ရင် လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သူမသာယာအောင် ဆက်လက်ကြိုးစားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူမဆိုရင်လည်း သင့်အတွက်
အမျိူးသားအများစုဟာ အမျိုးသမီး အများစုထက် ပိုပြီး ထွားကြိုင်းလေးလံကြပါတယ်။ ကိုယ့်ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိ ဘဲသွားဖိမိရင် အမျိုးသမီးတို့ ခဗျာ မခံချိမခံသာ ရှိလှပါမယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ်က လေးလွန်းနေလျှင် သူမရဲ့ ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ
သူမကို ပိမသွားစေပဲ ခြေလက်များနဲ့ အထောက်အကူပြုထားပါ။
(ကြားဖူးတာတော့ တစ်ခုရှိတယ်။ မိန်းမတွေ မလေးတာ ၄ မျိုးရှိတယ်တဲ့
၁။ ။ကိုယ်ဝန်လွယ်ရတဲ့ ဗိုက် ဘယ်လောက်ကြီးကြီး မလေးပါဘူး။
၂။ ။ကိုယ့်ယောကျာ်း ခန္ဓ္ဓ္ဓ္ဓာကိုယ် ဘယ်လောက် ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမလေးပါဘူး။
၃။ ။ရွှေ ထည်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက် ကြီးကြီးဝတ်ဆင်ရပါစေ မလေးပါဘူး။
၄။ ။ရင်သား ဘယ်လောက်ထွားထွား မလေးပါဘူး တဲ့)
မပြောပါနဲ့။ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့။နှစ်ယောက်သား ပျော်ပါးပြီးတဲ့ အခါ ဒီနေ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အတူတူ အိပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စသည်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရလို့ ပြောတဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မပြောမိပါစေနဲ့။ သင့်ရဲ့ အိပ်ယာဟာ ဟင်းချိုချက်ပေးတဲ့ မီးဖိုဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။
မြန်မာ့အိုးထိန်းသိမ်းရေး မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်
သဇင် .... ချစ်ဦးမှာလား ... တဲ့ သဇင် သီဆိုထားတဲ့ ချစ်ဦးမှာလား တဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အပန်းဖြေ နားဆင်နိုင်ဖို့ပါ။ သဇင်ရဲ့ တေးသီချင်း အသစ်တွေ မထွက်ပေါ်လာတာ ကြာပေမယ့် ဒီသီချင်းဟောင်းလေးက သဇင် ဆိုတာကို အသံလေး ကြားလိုက်တာနဲ့ သိသာနိုင်တဲ့ သင်္ကေတ သီချင်းတပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ http://youtu.be/WwRrcBFZi7k မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ..
နောက်ထပ် မူဗီထပ်လာပါဦးမယ်တဲ့ မကြာမှီလာမည် မျှော်ပေါ့.............